Six Minutes to Midnight (2020) | MM Movie Store
အခုလောလောလတျလတျ ၂၀၂၀မှာထှကျထားတဲ့ဒုတိယကမ်ဘာစဈကွိုကာလအတှငျးက ဇာတျကားလေးတဈခုကို မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ…သိကွတဲ့အတိုငျး World War II ဟာ ဂြာမနီက နာဇီခေါငျးဆောငျ ဟဈတလာရဲ့စဈမီးပှား စတငျလောငျကြှမျး ရာကနစေတငျခဲ့တာပါ…
ဒီစဈပှဲမတိုငျခငျကတညျးက အင်ျဂလနျရဲ့တောငျဘကျကမျးရိုးတနျး ဘကျဈဟေးမွို့မှာအထကျတနျးလှာတှရေဲ့သမီးပြိုတှကေို သီးသနျ့သငျပေးတဲ့အျောဂတျစတာဗဈတိုးရီးယား မိနျးကလေးကြောငျးရှိပါတယျ…ဒီကြောငျးကွီးကို ဂြာမနီရဲ့နောကျဆုံးဧကရာဇျဘုရငျမကွီးက တညျထောငျခဲ့တာပါ
အဲ့ကြောငျးမှာ ဂြာမနျနာဇီပါတီရဲ့အရာရှိကွီးတှရေဲ့သမီးပြိုတှလေညျး တကျကွပါတယျ….အင်ျဂလိပျလူမြိုး သောမတျမလောတဈယောကျ အဲဒီဂြာမနီကြောငျးကွီးကိုအင်ျဂလိပျစာဆရာအနနေဲ့ ရောကျလာတဲ့အခါမှာတော့…..ဘာတှဆေကျဖွဈကွမလဲ?? ဘာကွောငျ့ရောကျလာရတာလဲ??
ဒီဇာတျကားရဲ့နာမညျကိုက “Six Minutes to Midnight” သနျးခေါငျယံရောကျဖို့၆မိနဈအလိုတဲ့World War II မစခငျ ၁၇ရကျအလို ၁၉၃၉ ဩဂုတျ ၁၅ ကစပွီး အခွခေံရိုကျကူးထားတာပါစဈကားလိုမြိုးမဟုတျပမေယျ့ ရသတဈခုခုတော့ပေးစှမျးနိုငျမယျထငျပါတယျ… ခံစားကွညျ့ရှူကွပါဦး
အခုလောလောလတ်လတ် ၂၀၂၀မှာထွက်ထားတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြိုကာလအတွင်းက ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်…သိကြတဲ့အတိုင်း World War II ဟာ ဂျာမနီက နာဇီခေါင်းဆောင် ဟစ်တလာရဲ့စစ်မီးပွား စတင်လောင်ကျွမ်း ရာကနေစတင်ခဲ့တာပါ…
ဒီစစ်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက အင်္ဂလန်ရဲ့တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်း ဘက်စ်ဟေးမြို့မှာအထက်တန်းလွှာတွေရဲ့သမီးပျိုတွေကို သီးသန့်သင်ပေးတဲ့အော်ဂတ်စတာဗစ်တိုးရီးယား မိန်းကလေးကျောင်းရှိပါတယ်…ဒီကျောင်းကြီးကို ဂျာမနီရဲ့နောက်ဆုံးဧကရာဇ်ဘုရင်မကြီးက တည်ထောင်ခဲ့တာပါ
အဲ့ကျောင်းမှာ ဂျာမန်နာဇီပါတီရဲ့အရာရှိကြီးတွေရဲ့သမီးပျိုတွေလည်း တက်ကြပါတယ်….အင်္ဂလိပ်လူမျိုး သောမတ်မေလာတစ်ယောက် အဲဒီဂျာမနီကျောင်းကြီးကိုအင်္ဂလိပ်စာဆရာအနေနဲ့ ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့…..ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ?? ဘာကြောင့်ရောက်လာရတာလဲ??
ဒီဇာတ်ကားရဲ့နာမည်ကိုက “Six Minutes to Midnight” သန်းခေါင်ယံရောက်ဖို့၆မိနစ်အလိုတဲ့World War II မစခင် ၁၇ရက်အလို ၁၉၃၉ ဩဂုတ် ၁၅ ကစပြီး အခြေခံရိုက်ကူးထားတာပါစစ်ကားလိုမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ရသတစ်ခုခုတော့ပေးစွမ်းနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်… ခံစားကြည့်ရှူကြပါဦး